/Blog/Masteron Propionate/I-Masteron (i-Drostanolone propionate) Imiphumo, Isisindo, Imiphumo emibi
ezaposwa ngomhla 03 / 27 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Masteron Propionate.
Yonke into ngo-Masteron (Drostanolone propionate)
1. Yintoni i-Masteron Propionate? 2. I-Mastrone propionate isiqingatha sobomi
3. I-Masterone propionate yokusetyenziswa kwezobisi 4. Iimpembelelo ze-Masteron zenkcukacha
5. I-Masteron propionate VS enanthate 6. I-Masteron propionate dosage
7. Umgca we-Masteron propionate 8. Iimpembelelo ze-Masteron propionate
9. Thenga i-Masteron propionate 10. Ukuhlaziywa kwe-Masterone propionate
Yintoni i-Masteron Propionate?
Kwilizwi le-steroids, kukho iMastery ebizwa ngeDHT (Dihydrotestosterone). I-anabolic steroid esefom yefayili. Kwimarike, iyafumaneka kwiifom ezimbini ezenziwe yiDostanolone Enanthate kunye Drostanolone Propionate (521-12-0) Kukwaziwa nangokuthi yi-Masto, iMast, ne-Mastabol.
I-Enanthate inguqu ye-Masteron yaziwa ngokuba yi-Masteron Enanthate ngelixa iinguqulelo ze-propionate zibizwa ngokuthi yi-Masteron Propionate (521-12-0).
Ngaba uyazibuza ukuba le nkunkuma yenze njani kuqala kwi-market? I-Syntex yayikhulula nge-1970 ngexesha lokuqala. I-Masteron Propionate yafunyanwa kunye no-Anadrol kodwa ayikwazanga ukukhululwa ngaphambi kwe-Anadrol. Igama layo loshishino yi-Masteron kwaye liye laqhubeka liyakuthandwa kwaye liqhubeka liyithandwa ngabaninzi namhlanje.
Mastrone propionate isigamu ubomi
I-Masteron Propionate inomdla ubuncinane malunga neentsuku ze-2.5.
I-Masterone propionate yokusetyenziswa kwezobisi
I-Masteron Propionate eyaziwayo njengeDotstanolone Propionate yi-androgenic anabolic steroid (AAS) eyenziwe ngenjongo yokuza unyango lomhlaza. Kwixesha elidlulileyo xa izigulane zomhlaza zingenazo iinketho ezininzi, kwakungenye yezilonyiso ezisetyenziswa ngokubanzi. Ngethuba lokunyanga, lalisetyenziswa kunye ne-Selective Estrogen Receptor Modulator ebizwa ngokuba Tamoxifen. Bonke babenokukwazi ukuvimba ukukhula kwezinye zeentlobo zeeseli zomhlaza. Kwaye ke kwakunempumelelo kakhulu ekuphatheni izihlamba ezingaphenduliyo ngononophelo.
Kuye kusetyenziswe unyango lwemhlaza iminyaka engaphezu kwemashumi mabini, kodwa ngenxa yeempawu ezibonakalisa izilwanyana, ayikho into ekuthandwayo njengoko kwakunjalo.
Masteron Kwakhona kunceda ekunciphiseni amazinga e-cholesterol angabangela iingxaki zempilo ezinzulu ukuba amanqanaba aphezulu kakhulu.
Iimpembelelo ze-Masteron zenkcukacha
Umqambi omkhulu womzimba, ukhangela i-shredded enye yeenjongo eziphambili. Yenza umzimba ukhangeleke kakuhle kwaye ulunge ngakumbi. Ukuba nobukhulu obukhulu obungencikiyo ngokwaneleyo kuya kwenza ukuba ujonge ioli nangona ubukhulu bemisipha yakho kukufa.
I-Masteron Propionate yenye ye-steroids ehambisa xa ifika ekunqumeni. Xa isetyenziswe ngexesha lomjikelezo wokusika, lenza umntu axhomeke kakhulu, kwaye le sizathu sokuba abantu abaninzi banqwenele ukuyisebenzisa ekupheleni kwemijikelezo yomzimba ukususela ngeli xesha elinye sele lixhomekeke. Ukongezelela kwe-Masteron kwenza enye inqunywe kuyo nayiphi na inqatha yomzimba ekupheleni komjikelo.
Ukongezelela, yenza ukuba umzimba ube nzima. I Masteron Impembelelo-anti-estrogenic ekhokelela ekuphuculeni kubonakala komntu. Isiphumo siyabonakala kakhulu kumzimba womzimba ongezantsi kwe-10% yeoli yomzimba. Ngexesha elilandelayo kufuneka ukhangeleke ngokugqithiseleyo, kwaye i-Masteron Propionate yindlela yokuhamba.
Ukujonga okulungileyo akwanele; kufuneka udibanise ngamandla. Akukho nto eyenza umntu abe nolonwabo ngakumbi kunokuba akwazi ukwenza imisebenzi engaphezulu kunokuba uyasetyenziswa. Ukwenza uzive unamandla kunoko. Ngokunyusa amandla akho, unokwandisa inani lemisebenzi yomzimba owenzayo, fumana loo mzimba uphuphaze ufezekise zonke iinjongo ozicingayo ukuba awuzuze wazifumana.
Enye yeziphumo ze-Masteron oya kuzibona ziyakwazi ukuphakamisa iiplate ezinkulu. Ngaloo steroid, unokwenza umsebenzi ophezulu. Ezi Masteron uzuza akuzuzi nje kuphela iingenelelo kumzimba womzimba kodwa nabadlali. Unako ukugcina iikhalori ezidityanisiweyo zokutya ngelixa esenza umsebenzi wakhe. Kuyamnceda ukuba angayithandi ubunzima ngelixa lixesha elifanayo linika amandla, ukunyamezela kunye nokuphucula okukhawulezayo okufunekayo ekusebenzeni kwakhe.
I-Drostanolone Propionate yenye ye-steroids esetyenziswe xa umntu efuna ukwanda kodwa nangona kungenzi inzuzo eninzi. I Masteron vs Primobolan inzuzo ifana.
Abantu abaninzi baquka i-Masteron Prop kwisicwangciso sabo sokubhukuda ngenxa yokulahlekelwa kweoli kunye nemiphumo yokulwa ne-anti-estrogenic. Zombini iipropati ziqinisekisa ukuba ziyaqhubeka zipakisha kwiimisipha ngelixa zilahlekelwa ngamanqatha omzimba.
Nangona i-gains ayininzi, le steroid iphelele kumntu ofuna ukukrazula ibinzana lokugqibela lokugalela i-fat, ubuninzi kwimisipha kunye nokuphucula amandla abo.
I-Masteron propionate VS enanthate
Ezi zixhobo zombini zadla ii-Masteron ezihlukeneyo kodwa zinomlinganiselo omncinci. Esinye sezixhobo abelana ngazo kukuba ziyi-injection kwaye oku kwandisa ukuthandwa kwabo kuluntu lomzimba. Zomibini zenza iziphumo ezimangalisayo ngaphandle kokubeka umngcipheko wokubandezeleka kwemiphumo yecala.
Umehluko ufika kwisiqingatha-ubomi, umlinganiselo kunye namandla. I-Masteron Inanthate yinto eguquguqukayo ende ngexesha i-Masteron Propionate ifutshane.
Ngenxa yoko, Masteron Inanthate isetyenziswe ixesha elide lomjikelezo, oko kukuthi, ishumi ukuya kweyeshumi elinesibini kwiiveki okanye nangaphezulu nangona i-Masteron Propionate isetyenziswe ixesha elifutshane elinesine iveki ezintandathu. I-Masteron Propionate yenza ngokukhawuleza ngexesha i-Masteron Inanthate ingathatha ixesha lokuba uqaphele iziphumo.
I-Masteron Propionate i-dosage enikeziweyo iyancinci kakhulu xa kuthelekiswa neyo-Masteron Inanthate. Kodwa ke ilawulwa ngamaxesha amaninzi kuba icacisa kwinkqubo yomzimba ngokukhawuleza. Isilinganisi se-Masteron Inanthate sinikezelwa kwisixa esikhulu ngokuphindwe kabini ngeveki kuba senza ngokukhawuleza kwaye sihlala emzimbeni ixesha elide.
I-Masteron Inanthate ine-half-life of days malunga neentsuku ezilishumi kodwa i-proxyate i-2.5. Ngaloo ndlela, i-Masteron Enanthate ithatha ixesha elide ngaphambi kokucoca emzimbeni xa kuthelekiswa ne-Masteron Propionate.
I-Masteron propionate dosage
Ukuqonda i-Masteron propionate dosage kubalulekile kuba kuya kukugcina kude neengxaki ezinokukufumana xa ungayisebenzisi njengoko kufuneka. Ulwazi olunzulu kwi-Masteron propionate dosage luyakukunceda ukuba unqume ukuba yeyiphi imali ekufuneka uyithathe ukuze uzuze i-Masteron inzuzo.
Umlinganiselo osemgangathweni we-Masteron kumntu okhulile ngokuqhelekileyo u-300-400mg ngeveki. Kuthetha ukuba kufuneka ube ne-100mg injection yonke imihla ngemihla ezintandathu ukuya kweebhozo. Iiveki ezintandathu ukuya kweebhozo azikho, kodwa zimela umjikelezo we-Masteron, kodwa ixesha abantu abaninzi abanqwenela ukuthatha njengenxalenye I-Masteron stack.
Abanye abantu bakhetha ukwahlula umthamo wabo kwiijova zansuku zonke nangona oku akuthethi ukuba bayayichitha ngokupheleleyo yonke i-dose yomhla. Ukuba usebenzisa i-Drostanolone Enanthate, enye injini okanye ezimbini ngeveki zanele.
Kuyabasetyhini abasebenzisa eli liyeza kumnxeba webele lomhlaza, umlinganiselo omiselweyo we-100mg, kathathu ngeveki nganye malunga neesibhozo ukuya kweyeshumi elinesibini iyanconywa. Ingakhokelela kwimpawu zokuhlengahlengiswa, kodwa kuyafaneleka.
Kwabadlali abafuna ukufikelela emacaleni kwimiba yabo, i-50mg ngeveki ingaphezu kokwaneleyo xa kuthathwa iinyanga ezine ukuya ezintandathu. Xa ugqiba ukuqala ukusebenzisa le chiza, kukulungile ukuba uqale ngesilinganiso esezantsi ukuvavanya ukunyamezela. Abasetyhini banokunyuka ukuya kwi-100mg ukuba isichengiselwano sinyamezeleke emzimbeni. Umthamo we-Masteron ogqithisa i-100mg ngeveki kwiiveki ezingaphezu kwezine ukuya kweyesithandathu kunokukwenza umntu abe neengxaki zezilwanyana.
Umgca we-Masteron propionate
I-Masteron ingasetyenziselwa yedwa okanye ifakwe kunye nezinye i-steroids kumjikelezo we-Masteron. Kuxhomekeke kwiinzuzo ze-Masteron ofuna ukufezekisa. Kungenzeka ukuba i-bulking okanye umjikelezo obunzima. I-Masteron ibonise ukusebenza kakuhle xa isetyenziswe kwimigudu yokusika apho injongo ephambili yomsebenzisi ukulahlekelwa ngamafutha kunye nokwandisa inkcazo yemisipha yakhe. Nantsi imbonakalo yendlela umjikelezo we-Masteron ungaba ngayo.
Umqali oyi-Masteron Cycle
Apha, i-Masteron Inanthate isetyenziswe ngenxa yemeko enokuthi abantu abaninzi abaqalayo baqala ukujonga kwi-androgenic / anabolic steroids (AAS). Inzuzo yokusebenzisa i-Masteron Inanthate kukuba inika ithuba lokufumana iishedyuli ze-injection ezingapheliyo kwaye iyahambelana kakhulu Testosterone Enanthate.
Kule meko, omnye kufuneka athathe i-Testosterone Enanthate kwisilinganiso se-300-500mg ngeveki. Ungasebenzisa umyinge oziva usebenza kakhulu kuwe nokuba umzimba wakho unokunyamezela. Isizathu esiyinhloko sokuqhuba umjikelezo onjalo we-Masteron kukusebenza njengesingeniso kwaye uvavanye umphumo we-Masteron. Ekubeni i-Masteron inefuthe elikhubaza i-aromatase, akudingeki ukuba isetyenziswe kunye nenye enye i-aromatase inhibitor. Nangona kunjalo, isiphumo sokungavimbeli asinamandla, kwaye xa usenokusebenzisa amaninzi amanqwanqwa anokonakalisa kwi-stack. I-Masteron ayikwazi ukusebenza ngokufanelekileyo, kwaye unokufuna ukusebenzisa i-inhibitor enamandla. Nasi umzekelo wokuqala we-Masteron Cycle;
Ixesha-Iiveki ezilishumi elinambini
Ukususela ngeveki 1-12
Masteron (I-Drostanolone Inanthate) kwi-400mg ngeveki
I-Testosterone Inanthate kwi-300-500mg ngeveki.
I-Masteron Cycle ephakathi
Lo mjikelo ujolise ukufumana ubunzima obuxumi kunye nokunqunyulwa kwamanqatha omzimba. Iyanzima izihlunu ngelixesha elifanayo linika ilahleko okanye i-gain gain (muscle gain) ngenzuzo encinci yeoli kunye nokugcinwa kwamanzi. Nangona kunjalo, ukufezekisa oku, kufuneka uyisebenzise ngokutya oku kunokukunceda uqonde ezi ziphumo.
I-Testosterone isetyenziswe kwisilinganiselo se-100mg ngeveki kwiThertosterone Replacement Therapy. Isizathu salokhu kukumelana nokukhutshwa kwemveliso yendalo yeTestosterone yi-anabolic steroids kulo mjikelezo ke ke unikezele ngokufanelekileyo ukuze umzimba uqhubeke usebenza ngokuqhelekileyo.
Isilinganiselo esisezantsi seTesttosterone sinokubala naziphi na izinto ezinokuthi zenzeke izinto ezinokuthi zenzeke; ngoko akukho mfuneko yokusebenzisa i-aromatase inhibitor. Ukusetyenziswa kokubili i-Masteron no-Anavar kunika omnye umzimba okhuni okanye ngokusika okanye ngokufumana ubunzima obungapheliyo ngaphandle kokwenza kube lula ukugcinwa kwamanzi.
Iveki 1-10, thabatha;
Masteron (Drostanolone Propionate) 100mg yonke imihla okanye 400mg ngeveki
Testosterone Propionate kwi-100mg ngeveki okanye kwi-25mg yonke imihla.
U-Anavar kwi-50-70mg ngosuku
Yona mjikelezo we-Masteron onamandla kunayo yonke into eyenziwa yinkimbinkimbi yomzimba kunye nokusika ngenkathi iqhubeka isinika amandla amaninzi afunekayo ukuququzelela ukukhwabanisa okanye ukufumana isisipha esifutshane. Yonke into ifana nomjikelezo ophakathi, kwaye umahluko nje kuphela kukuba kule ngxaki kukho ukongeza Trenbolone.
Abaqulunqa umzimba baxabela malunga neenzuzo ze-Masteron ezinikezelayo baninzi baqaphela ukuguqulwa nokuphawuleka okukhulu kwimizimba yabo. Iintlawulo ze-Masteron ziphucula xa zisetyenziselwa kunye nokutya okufanelekileyo kunye neeshedyuli zoqeqesho ezihambelana nesiphumo esisemva. I-Trenbolone inamandla kwaye ayinakucacisa kunye kunye ne-Masteron; banikezela iziphumo ezigqibeleleyo.
Ixesha- Iiveki ze-10
I-Masterone (Drostanolone Propionate) kwi-400mg ngeveki / Drostanolone Propionate 100mgnaliphi na usuku.
Testosterone Propionate kwi-100mg ngeveki okanye 25mg yonke imihla
I-Trenbolone Acetate 400mg ngeveki okanye 100mg ngalunye usuku
I-sideon propionate effects effects
Ngokubanzi ukusetyenziswa kweziphumo ze-Masteron, le nkunkuma ibonakaliswe kakhulu. Kwimimandlakazi, kubikwa ukuba kubangele iimpawu zokuphila, imeko elawulwayo nokusetyenziswa kwesicwangciso esilungileyo. Nazi iziphumo ezichaphazelekayo ze-Masteron ezichazwe kwiindidi zazo;
Ezinye zeempembelelo ze-Masteron zi-androgenic. Ziquka ukukhula kweenwele zomzimba, intsimbi, kunye nokulahlekelwa kweenwele ngokukhawuleza kulabo abaxhomekeke kwindoda yesimo somntu. Kuyabasetyhini, iimpawu ezinjengezilwanyana ezinjengokujuliswa kwezwi, ukukhuliswa kwamacandelo kunye nokukhula kweenwele zomzimba kuye kwabikwa.
Kodwa ke uya kuqaphela ukuba iimpawu zezilwanyana zenzeke xa umntu ephezulu kwi-Masteron dosage, umz. Ngomlinganiselo omncinci, awunakwenzeka ukuba uhlupheke kule Miphumo ye-Masteron. Ukuba baqhubeka, bayeke ukusebenzisa i-Masteron, kwaye iimpawu ziya kutshabalala.
Masteron inokuchaphazela amazinga e-cholesterol ngeendlela ezithile. Kungenzeka ngokunciphisa i-cholesterol ye-HDL okanye ukwanda kwe-LDL cholesterol. Kwakhona kukho iimeko ezimbalwa zempembelelo embi kwixinzelelo legazi elibikwe.
Ngale ngqondweni, ukulawulwa kwe-cholesterol kubalulekile ngeli gama. Kwakhona, ukuba unesimo esasikhona ngaphambili kwi-cholesterol ephezulu, ke le chiza alikhuselekile kuwe. Ukuba ungeke uhlupheke kule nto, qiniseka ukuba ugcina indlela yokuphila yobomi be-cholesterol. Kuthetha ukuthini ukuba kufuneka uthathe ukutya okunempilo okunama-acidi e-fatty acids kunye nokubandakanyeka kwimisebenzi ye-cardiovascular.
Iindaba ezilungileyo kukuba Masteron akusiyo i-hepatotoxic anabolic androgenic steroid kwaye ayiyi kubangela umonakalo kwisibindi sakho. Asikho isidingo sokukhathazeka malunga nesibindi sakho esiphumelele xa ukhona Masteron unyango.
Ukunciphisa ukuhlolwa kweTesttosterone ngenye yeempembelelo ze-Masteron. Ukuba testosterone ephantsi emzimbeni awunempilo kuphela, kodwa kunokukwenza uhlupheke kwiimeko ezahlukeneyo. Ukujongana nalokhu, kufuneka uthabathe u-testosterone ukuqinisekisa ukuba awunayo intsalela.
Emva komjikelo we-Masteron, kubalulekile ukuba wenze i-PCT encedisa ukukhawuleza ukubuyisela. Ngenxa yoko, ukuveliswa kwe-testosterone yemvelo kuya kubuya kwinqanaba elifutshane.
I-Gynaecomastia kunye nokugcinwa kwamanzi yizinye zeempembelelo ezixhaswa ngabantu xa besetyenziswa kwi-steroids. Ngethamsanqa, nayiphi na imiphumo ye-estrogenic ayifumanekanga ne-Masteron kuba ayinayo nayiphi na into ye-progestin. Kwakhona kuthetha ukuba uxinzelelo oluphezulu lwegazi olungabangelwa ngamanzi amaninzi aluyi kuba nexhala malunga nokusetyenziswa kwe-Masteron.
Ngeli steroid, awudingi ukusebenzisa i-anti-estrogen. Nangona kunjalo, ngokuxhomekeke kumjikelezo we-Masteron okanye u-stack oyithathayo, unokufuna i-anti-estrogen.
Thenga i-Masteron propionate
Wonke umqambi womzimba okanye umgijimi angadinga ukusebenzisa i-Masteron propionate ubuncinci kanye kanye emsebenzini. Kwakhona, abo bafuna Masteron prop ngenxa yonyango iinjongo kunokuzibuza ukuba ungayithenga kuphi.
Ngexesha elide, kwakungekho nto ekhethekileyo. Kwababakhi bomzimba, omnye wayefanele afike kumntu omkhulu kwindawo yokuzivocavoca aze abuze ukuthunyelwa. Abo bafuna le myeza banokuthi baxoxe nabahlobo baze bacele ivenkile engcono kakhulu ayithengayo kunye nethemba elona lifanelekileyo. Le mihla, izinto zihlukile. Abantu akufuneki ukuba bajonge izitolo ngokuziphathekayo ukuze bathenge into abayifunayo. Kukho enye indlela; ukuthenga intanethi.
Njengokuba abanye bangayiboni i-intanethi, yindawo engcono kakhulu yokufumana i-Masteron ukuthengiswa. Kuyindlela efikeleleke ngakumbi kwaye engcono apho ungathenga khona i-Masteron propionate.
Apha ungakwazi ukufunda iimpendulo, imizila engcono kunye neempazamo abantu abaye bazenzile ngexesha elidlulileyo ekugqithweni kwekhaya lakho, iofisi, njl. Kungakhathaliseki ukuba indawo yakho yintoni, umkhiqizo ungathunyelwa kwindawo efanelekileyo. Kungcono ukuba ufumane ukuthenga nokufumana ipakethi yakho ngokungaziwa ngokupheleleyo. Wonke umntu akafanele azi ukuba unjani.
Ewe, ukuthengwa kwe-intanethi akugqibekanga kuwo wonke umntu. Awunakuqiniseka ukuba uya kufumana iimveliso zakho emva kokuzihlawula. Ngaphandle koko, ungeke uqiniseke ukuba ixesha eliza kuthatha ukuthatha lona ukuze uzuze. Into enhle yiyo yonke imiba iyakhutshwa. Oko okumele ukwenze ukufumana umthombo othembekileyo we-Masteron propionate, kwaye awusoze wakhathazeka malunga naluphi na umyalelo owenzayo.
AASraw yindawo engcono kakhulu apho ungathenga khona i-Masteron propionate. Sinikela nge-Masteron ethembekileyo ekuthengiseni kwixabiso le-Masteron elingabizi, kwaye ukuhanjiswa kwethu kukhawuleza. Ngaphandle kokuba i-Masteron yethu inomgangatho ophezulu. Akunakukunikezela kuphela ngeenzuzo eziphezulu ze-Masteron kodwa kuya kuthatha ixesha elifutshane ukuba uqaphele iziphumo. Siyakucinga ngempilo yakho, kwaye unokuqiniseka ukuba i-Masteron propionate yethu iphephile kwaye isebenza kakuhle. Fumana i-Masteron propionate evela kuthi namhlanje kwaye uqaphele iziphumo ze-Masteron ezimangalisayo ngexesha elifutshane kunokwenzeka.
Ukuhlaziywa kwe-Masterone propionate
I-Drostanolone Propionate inokunikela ukuphucula okubonakalayo kumandla onke kunye nokunika inzuzo oye wayifuna. Uya kuphawula ukuba i-Masteron ngaphambi nangemva kweziphumo zabanikezeli ngabasebenzisi ngabanye behlabathi. Nazi ezinye zeengxelo ezivela kubantu abasebenzise ngaphambili;
Uthi uKen uthi, "Ndichitha ixesha elide ndicinga ukuba ndimele ndisebenzise ukuze ndizuze. Ndinezihlunu ezinkulu, kodwa zazingabonakali njengoko ndandifuna ukuba zibe. Kwakubonakala ngathi amaninzi amanqatha. Emva kokuphanda kakhulu, ndafumana i-Masteron Propionate apho abantu abaninzi babancoma. Phakathi kwe-steroids ezininzi esetyenziselwa ukusika, le nto yavela, kwaye ndatsho ngokwam, kutheni ungazami? Ndiyayilawule kwaye ndayifaka emjikelezweni wam wokusika. Kwiiveki ezine, sele ndiqalile ukuphawula ukuhluka. Ngeli xesha ndiyenziwe ngomjikelezo, umzimba wam wawubonakala lukhuni. Iimisipha zam ezibonakalayo ngelixa zingamitha. Into entle kukuba iimisipha zam zihlala zihleli. Ndiyathokoza kakhulu nge-Masteron Prop kwaye ndiyakuyincoma ukuba nabani na onqwenela ukuba nomzimba omkhulu. "
UZhang uthi, "Ndiphantse ndiyenze ngeeveki ezisibhozo zokujikeleza, kwaye ndiziva ndivuyiswa kakhulu yi-Masteron. Le steroid yandibukeka ibukeka ibuhlungu, kwaye bonke oogxa bam e-gym baye baqaphela. Baqhubeka bebuza into endiyisebenzisayo ukufumana iziphumo ezimnandi. Kwiiveki ezisibhozo, andizange ndifumane nayiphi na imiphumo emibi. Yenza i-steroid engcono ndayisebenzise ngoku. Ungathemba ukuhlaziywa kwe-Masteron, kwaye uza kuvuna iziphumo ezilungileyo. Le steroid yokusika iyona nto ibhetele. "
UAh Kum uthi, "Njengomgijimi, ndihlupheke ngenxa yokungabi namandla okwaneleyo ngenxa yokungabi naso kwesitashi esininzi kwisondlo sam. Ngamanye amaxesha ndiza kuhamba ndize ndifumane umgama. Uyakwazi ukuxelela indlela ukukhathazeka ngayo xa unomncintiswano wokugijima kwinyanga kunye nokuzibandakanya kukuqala kukukhathaza. Umhlobo uphakamise i-Masteron Propionate ngenxa yokusebenza kwayo ngokungongeza ngamandla. Ndaphinde ndafunda ukuba ayibonakali ngexesha lovavanyo lwe-doping ngenxa yexeshana zobomi balo. Okwangoku undinike lonke amandla endikufunayo. Ndiyakwazi ukusebenzisa yonke imini ngaphandle kokuthatha ikhefu elide njengoko ndenze ngaphambili. Ulungiselele amandla amaninzi kunokuba ndikulindele kwaye ndiya kuwusebenzisa ixesha elide ndikhuphisana nayo nawuphi na umncintiswano. Kuyinto enkulu ye-steroid. "
UChunhua uthi, "I-Masteron Propionate yintsebenziswano yangempela xa kuziwa ekuphumeni, kwaye ndihlala ndiyabulela ngonaphakade. Ndiyisebenzise emgceni wam ngenxa yokuba ndandinomncintiswano wokwenza imodeli ekhoneni kwaye konke endikuthiyo kukuba uyinqobile. Abanye abantu baye bahamba ngokukhawuleza, kodwa imfihlelo ifumana i-Masteron esemgangathweni. Ndisoloko ndithenga kuyo ukusuka ku-AASraw kwaye ndingazange ndibe neengxaki zobungqiqo. Ngaphandle kokuba bafumana ixabiso elihle kakhulu lika-Masteron ongayifumana kwimarike. Ngoku ndixhomekeke kwaye ndingakwazi ukubheja ukuba ndiza kuvela phambili. Kuye kwagqithisa kumanqatha ngaphandle kokubangela ukuba ndihlupheke ngenxa yeziphumo ezinobungozi nezinye i-steroids. Ndihlala ndihlala kwaye ndiza kuhlala ndiya kwi-Masteron Propionate. "U
UKum uthi, "Eli gciwane lncedise umama wam ogulayo ekulwa nomhlaza wesifuba. Emva kokuchitha ixesha elininzi kwi-chemotherapy kunye nokubandezeleka ngenxa yeziphumo ezimbi ezibangelwa yiyo, ngoku sinokubona ukukhanya ekupheleni kwendlela. Yona nto ingcono xa uvakalelwa kukuba umdlavuza webele uthabathe inkokhelo kuwe. "
Ukuzivocavoca kunye nokuveliswa komntu: Ukuphazamiseka kweZenzalo kunye nokunokwenzeka ..., u-Diana Vaamonde, uStefan S du Plessis, u-Ashok Agarwal, iphepha 230
I-Anabolic Edge: Iimfihlelo zaloo Mandla kaMoses oMninzi, uPhil Embleton, uGerard Thorne, uRobert Kennedy Ukushicilela, Ikhasi 18
Ii-Anabolics, uWilliam Llewellyn, Ikhasi 33
Thenga i-Masteron Propionate powder for bodybuilding: i-6 inyaniso kufuneka uyazi !!!
I-Oral Strongest Oral Strongest Steroids Methasterone (Superdrol) iPhormone	I-Masteron Inanthate I-Longer Esebenzayo ne-Androgenic Anabolic Steroid (AAS)